Isofthiwe ye-IntelliCAD CAD. I-CAD Ehlukile
I-Wms2Cad - isebenzisane nezinsizakalo ze-wms nezinhlelo ze-CAD
I-Wms2Cad iyithuluzi eliyingqayizivele lokuletha emisebenzini ye-CAD yomdwebo we-WMS kanye ne-TMS njengokubhekisela. Lokhu kuhlanganisa amasevisi webalazwe nezithombe ezivela kumamephu we-Google Earth ne-OpenStreet. Kuyinto elula, esheshayo futhi ephumelelayo. Khetha kuphela uhlobo lwemephu kusuka kuhlu oluchazwe ngaphambilini lwezinsizakalo ze-WMS noma uchaza omunye owathandayo, ...
Ikhiqiza sokunqophisa iziza CivilCAD
Izinhlelo ezimbalwa kakhulu zenza lokhu, okungenani nge-simplicity eyenziwa yi-CivilCAD. Yini esiyilindele, ngokujwayelekile, umbiko wezakhiwo, nge-block, netafula yayo yezikhombisi-ndlela nezindawo ezikude, imingcele kanye nokusetshenziswa. Ake sibone ukuthi singayenza kanjani nge-CivilCAD, sisebenzisa i-AutoCAD nakuba isebenza neBricscad engabizi futhi ...
I-AutoCAD-AutoDesk, cadastre, IntelliCAD
FastCAD, nesithunzi AutoCAD
Uma bengakaze bazizwe nge-FastCAD ... kufanele. Ngiyazi, ungase uqale wazi ukuthi lolu hlelo ukhona, kodwa ngifuna ukuthatha isikhashana kulobubusuku ice cream ne Oreos ukubonisa ithuluzi sinokuthile ukufunda ngisho indima yokugcina. Kungani FastCAD kubalulekile Well, ...
Autodesk DGN DWG umbono wami wokuqala
Sawubona abangani bami, basebenzisa amaholide, ama-cocktails, ama-nacatamales nama-hugs wonyaka omusha. Kuhle ukubuyela emuva kulolu hlangothi lokuphila, ngonyaka omuhle wezindaba. I-AutoCAD ivela eminyakeni engu-3 yokuguqula isikhombimsebenzisi futhi lapho ithi lokhu kungaba ngonyaka ...
I-AutoCAD 2012 Autodesk Bentley Systems DGN DWG Ipad
I-AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-2 ngibhala ngezihloko ezibucayi mayelana nobuchwepheshe, ngokuvamile mayelana nesofthiwe nezinhlelo zayo. Namuhla ngifuna ukuthatha ithuba lokuhlaziya ukuthi kusho ukuthini ukukhuluma nge-software, nethemba lokudala umbono, ukugqamisa izimfanelo kanye nendlela abasabela ngayo kwimali engenayo namagama okwenza ithrafikhi ...
Ngithanda i-Geoinformatics, ngaphandle kokuba ngumagazini onomusa omkhulu, okuqukethwe kuhle kakhulu ezindabeni ze-geospatial. Namuhla inguqulo ye-Ephreli isimemezelwe, lapho ngithathe khona imibhalo ekhonjiswe ebomvu ukuze ibashukumisele ekufundeni okunomsoco. Ngenguqulo yangaphambilini engibuyekezile, namhlanje ngi ...
Ukuqhathaniswa kwesofthiwe ye-CAD
Njengoba nje kukhona ukuqhathanisa phakathi izixazululo Geographic Information Systems GIS, futhi Wikipedia kukhona itafula afanayo CAD amathuluzi okuhloswe ngazo ukuthi njengoba AEC (Architecture, Ubunjiniyela nokwakha) eyaziwa Kukhona othisha ekolishi, ngokuvamile akusebenzi abakutshela abafundi babo ukubeka Wikipedia ...
ArchiCAD, I-AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, Microstation-Bentley
I-ProgeCAD, enye enye indlela eya ku-AutoCAD
I-ProgeCAD isisombululo esincinyiwe esisezingeni eliphansi esekelwe ubuchwepheshe be-IntelliCAD 6.5, engamkelwa ngokugcwele njengendlela yokufaka isofthiwe kwizinga le-AutoCAD. Ake sibone ukuthi yini i-progeCAD: Efana ne-AutoCAD Iqiniso lokuthi lifana ne-AutoCAD kokubili emiyalweni nasemisebenzini ivumela ukuthi asikho isidingo sokuqeqesha ...
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngacabangele ukuhlolwa ukuthi iNetbook enjalo isebenza endaweni ye geomatic, kulokhu ngiye ngahlola i-Acer One ukuthi abanye ochwepheshe basezindaweni zasemakhaya bangithume ukuba ngithengise edolobheni. Isivivinyo sangisiza ukuba nginqume ukuthi uma ngithola imali engilandelayo ngitshala imali kwenye i-HP ephezulu ...
I-Acer Aspire Bentley Systems Blog DGN I-GvSIG OS GIS ezininginingi
Geospatial - GIS, IntelliCAD, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley
Ukuqhathanisa BitCAD - AutoCAD (Round 1)
Ngaphambi kokuba ngikhulume nge-BitCAD, okuyinto ehlukile yezomnotho eya ku-AutoCAD, ngokukhangisa okunonya kakhulu futhi okwamanje ikhishwe inguqulo ye-6.5 ngezici ze-3D. Nsuku zonke izinkampani eziningi ziphoqeleka ukushiya umkhuba wokuqhaqhazela ngoba izivumelwano zamazwe ngamazwe zithola ohulumeni abaningi abathintekayo ...
Ngemva kokufa kwe-SAICIC, izinhlelo eziningana zaseMexico zanikezela le makethe, yinto eyodwa yezindawo zobunjiniyela ezazisungulwa kuqala. Ngikhumbula ukuthi ngezinye izikhathi nginikeza inkambo yokubiza, futhi kwakudingeka ukuzama izicelo ezahlukene (ezitholakala ngalezo zinsuku), njenge-NewWall, i-Opus, i-Champion ne-Neodata. Lokhu kubonakala sengathi ...
I-AutoCAD-AutoDesk, Ubunginiyela, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Ngicabanga ukuthi ukukhangisa kwe-BitCAD kuhle kakhulu, okuvela ku-IntelliCAD, okuyiyona ndlela engcono ehlukile ku-AutoCAD njengoba ngikhulume nawe esikhathini esifushane esidlule lapho senza isibuyekezo esikhulu kakhulu salolu hlelo. Inikeza isifundo esihle emnyangweni wokumaketha we-Manifold hehe. Futhi ngenxa yokuthi ngiyabathanda, ba ...
DWG GIS ezininginingi
I-Foundation for Free Software (i-FSF) idalwe ku-1985 ngenhloso yokukhuthaza ukusetshenziswa, ukuthuthukiswa nokuvikelwa kwesofthiwe ngaphansi kwamalayisensi angewona amalungelo okuthengisa. Nge-Gigabriones Ngifunde ukuthi i-FSF yamemezele amaphrojekthi ayishumi nanye okuqala, kufaka phakathi kokubili ezindabeni ze-geospatial: I-Google esikhundleni ...
I-AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, -Google Earth / Amamephu, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Ngithola inkinga kumchwepheshe osebenzisa i-Microstation V8, efuna ukufunda ifayela le-AutoCAD 2008. Umlando omncane Ifomethi ye-dwg eqale isetshenziswe yi-Interact CAD, eyenziwe ngu-Mike Riddle eminyakeni engu-70, lokhu kungomunye wabalingani be-AutoDesk owaqala igama elifanayo lesandiso ...
I-BitCAD, i-AutoCAD eshibhile
I-BitCAD ingenye yezindlela eziningi ezivela ohlelweni lwe-IntelliCAD, okuvumela ukuthi ube nethuluzi le-CAD, njenge-AutoCAD esebenza, kodwa ngezindleko eziphansi. I-IntelliCAD yayiyinhlangano eyasungulwa ye-Open Design Alliance, eyadala ukuthuthukisa indawo yokuklama yocomputer eyimpembelelo engcono kakhulu yokuphoqelela i-AutoDesk eya ...
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi elilandelayo